Moe Kai: weekends
မနက်ဖြန်လဲ လန်ဒန်ကို Training အတွက်နဲ. သွားရပြန်ဦးမယ် ဆိုတော့ကာ။ ဒီအင်္ဂလိပ်တွေက Training တုို. Certificate တို.ကို အလွန် အသားပေးတယ်ဆိုတော့လဲ။ မနက်ဖြန် အတွက် ကတော့ ဒါဏ်ရာရနေတဲ့ လူနာကို ဘယ်လို သယ်ထုတ် ရမယ်ဆိုတဲ့ အားကစား ပွဲတွေအတွက် ရှေးဦး ကုသမှုတွေ အတွက်ပါ။ လည်ပင်း (Cspine injury) အတွက် Log roll လုပ်နည်းတွေ၊ ကျိုးနေတဲ့ အရိုးတွေ အတွက် ဘယ်လို Traction လုပ်ရမလဲဆိုတာ တွေအပြင်၊ IV line (အကြောထဲ့ ပိုက်ထဲ့တာ) မရရင် ဘယ်လို Intraosseous access (ရိုးတွင် ချင်စည်ထဲ့ လိုင်းထဲ့တာ) ယူရမယ်ဆိုတာတွေက အစ လေ့ကျင့်ရပါမယ်။
Intraosseous Line အကြောင်းပြောတော့ ဒီတပတ် အရေးပေါ်ဌာနမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေး တခုကို ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်။ Heroine IV drug user (ဘိန်းစွဲပြီး အကြောထဲ ဘိန်းထိုးထဲ့တတ်သူ)တယောက် ဆေးရုံ ရောက်လာပါတယ်။ ဘိန်းအလွန်အကျွန် သုံးပြီး Respiratory Depression နဲ.ရောက်လာတာပါ။ ဘိန်းကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ထိခိုက်တယ်လို. အလွယ် ဆိုရမလားဘဲ။ ဒီလူနာက မကြာခဏ ဆေးရုံကို အဲဒီလိုဘဲ လာနေကြပါ။ ဆေးရုံရောက်လုို. အမြန် Antidote ပေး၊ ဆေးကုလို.သက်သာလာပြီ ဆိုရင် ဆေးရုံအပြင်ခိုးထွက်။ ဆေးရုံက အကြောထဲ ဆေးပေးဖို. ထဲ့ထားတဲ့ IV Cannula ထဲ ဘိန်းတွေကို သွားသွား ခိုးထိုးပြန်ပါရော။ အဲဒီနေ.ကတော့ အကြောလိုင်းကလဲ ရှာလို.မရ (ဘိန်းသုံးသူတွေရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း)၊ ဒီလူနာရဲ့ အရင် History တွေကိုလဲ သိထားတယ်ဆိုတော့ သူ.ကြည့်တဲ့ ဆရာဝန်က အမြင်ကပ်ကပ်နဲ. Intraosseous Line ထဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ကျမတို.က ဒီ Procedure ကို အလွန် အင်မတန် အရေးပေါ် အခြေအနေ၊ လူနာ သေကောင်ပေါင်းလဲ ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေ မျိုးမှာပဲ သုံးပါတယ်။ ကိုယ့်ခြေသလုံးရှေ.က အရိုးထဲကို Drill နဲ. ဖောက်ပြီး ပိုက်ချောင်းတခုထဲ့၊ အဲဒီထဲကိုမှ ဆေးထိုးပေးရတယ် ဆိုတာ ပုံမှန်လူတိုင်းတော့ အလွန် မသက်မသာခံရတဲ့ Procedure လို.ဘဲပြောမှာပါ။ ... သြ .. NON JUDGEMENTAL MEDICINE !!! ..